koswan: ဟောဒီက Tag ဗျို့
ပထမဆုံး ကျေးဇူးတင်ရမှာက - ဒီပို့လေးကို ရေးခိုင်းတဲ့ မကြီး မ၀ါ နဲ့ သူငယ်ချင်း မီးလေး ( ပေါင်းရေးလို့ စိတ်မဆိုးရဘူးနော် အဟီး )
ပထမဆုံး သောက်ရတဲ့ အရာ - အမေ့နို့လား ၊ ရေလားမသိဘူး။ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုတော့ သေချာတယ်။
ပထမဆုံး စားရတဲ့ ထမင်းက - ထမင်းစားနိုင်တဲ့ အရွယ် ပထမဆုံးနေ့ရဲ့ ပထမဆုံး အလုတ်
ပထမဆုံးနေခဲ့တဲ့ မြို့က - အခုလည်း အဲမှာပဲ နေပါတယ်။
ပထမဆုံးကျောင်း - အ-မ-က(၃) အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း
ပထမဆုံး အတန်းကတော့ - မူကြိုပေါ့. ပြီးမှ ကြက်ချေးတန်း
ပထမဆုံး သူငယ်ချင်း - မူကြိုက သူငယ်ချင်း ၊ နာမည်က အာကာ (သူ့ဘယ်ဘက်လက်လေးမှာ လက်ချောင်းလေးတွေ မပါဘူး) အခုတော့ ဘယ်ရောက်နေတယ် မသိတော့ပါဘူး။
ပထမဆုံး ဖတ်မိတဲ့ကာတွန်းကတော့ - ရွှေသွေးလား၊တေဇလား၊မိုးသောက်ပန်းလား မမှတ်မိတော့ပါ။
ပထမဆုံး ရတဲ့ဆု - ပြောရင် ယုံမလား မသိဘူး . ( ယုံလိုက်ပါ ) ဆုကို မရဘူးတာ အဟား ။
ပထမဆုံး အရိုက်ခံရခြင်းတဲ့ - ရိုက်လို့ရတဲ့ အရွယ်ဆိုကတည်းက အရိုက်ခံရတာပဲ . (အဟီး)
ပထမဆုံး သွားဖူးတဲ့ ခရီး - မုံရွာမြို့ကိုပါ။
ပထမဆုံး စီးဘူးသောကား - ထော်လာဂျီ 
ပထမဆုံး ဆိုတဲ့ သီချင်း - ………..how are u ?.how are u ? very ,very thank u , very ,very thank u how are u…how are u …(အစ စာလုံးကိုတောင် အသံပဲ ထွက်တတ်တော့တယ်. ဘယ်လို စာလုံးပေါင်းမှန်း မသိတော့လို့ မရေးနိုင်ဘူး :P)
ပထမဆုံးရေးဘူးတဲ့ ကဗျာ - အမေ ကဗျာ
ပထမဆုံး ရေးဘူးတဲ့ ရည်းစားစာ - ရေးဘူးတာပေါ့ ။ (ဒါပေမဲ့ မပြောပါဘူး) :P
ပထမဆုံးရသော ရည်းစား - လျှောက်ပြန် သံပေး၊ ခြေအေး ၀မ်းယောင်ဆိုတာ အနော့်ကို ပြောတာ။
ပထမဆုံး ရဘူးသော လက်ဆောင် - ဖေဖေ နဲ့ မေမေက ၀ယ်တော့ ပေးနေတာပဲ . ဒါပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ သားကြီး အတွက် လက်ဆောင်ရယ်လို့ မပြောဘူးခဲ့တော့ …ဘယ်လို ပြောရမယ်ကို မသိဘူး။
ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံခြား - ရှရာပိုဗာ ခေါ်လို့ သာ လာရတာ. သိပ်တော့ စိတ်မပါလှဘူး။ မလာရင် ငိုပါမယ် တကဲကဲ လုပ်နေလို့လေ။
ပထမဆုံး လေယာဉ်က လည်း - အဲတုန်းက မှ စီးဘူးတာ.
ပထမဆုံး တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားရတာ - ရန်ကုန်ကနေ အိမ်အပြန်(တော်တော်လေး ပျော်တာ)
ပထမဆုံး သောက်ဖူးတဲ့ ဆေးလိပ်၊အရက် - ဒုတိယနှစ်မှ စပြီး ဆေးလိပ် ခိုးသောက်တတ်တာပါ။ အရက်ကတော့ ကျောင်းဆင်းပွဲညမှ သောက်ဘူးပါတယ်။
ပထမဆုံး ဆေးရုံတက်ရတာ - ပြင်ဦးလွင်မှာ သင်တန်းတက်နေတုန်းကပါ. ဆေးအခေါ်အဝေါ်အရ Bell Percil လို့ ( ထင်ပါတယ် ) ပါးစပ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်သလို ဖြစ်သွားတာပါ. ဘယ်တုန်းကမှလည်း ရောဂါ မရှိခဲ့ဘူးတော့ အဲလို ဖြစ်မယ်လည်း မထင်ဘူး။ ဖြစ်နေတာ သိသိကြီးနဲ့ ပေတေနေတာလေ. ကံကောင်းလို့ အဲနေ့က သင်တန်းမှုးနဲ့ Table Tenis ကစားနေရင်းမှ .. မင်း ပါးစပ်က ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲကွဆိုပြီးမေးမှ ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်မှ သင်တန်းမှုးက မင်း အဲဒါလေဖြတ်ချင်လို့ဟ ဆိုပြီး သံပရာသီးတွေ ချက်ချင်းယူပြီး ပွတ်ခိုင်း၊ ပြီးတာနဲ့ ဆေးရုံတက်ခိုင်းတော့တာပါပဲ ခင်ဗျာ. သင်တန်းမှုးသာ မပြောခဲ့ရင် အခုချိန်ဆို ကိုချွန်တွန်း ဖြစ်နေလောက်ပြီ အဟား။
ပထမဆုံး ကြည့်ဖူးသော ရုပ်ရှင် - “တစ်ကယ်ဖြစ်ချင် တစ်ကယ်လုပ်၊ အဟုတ်ဖြစ်ရမည်” ဇာတ်ကားနာမည် ဟုတ်လား မဟုတ်လား မသိပါ. ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းနဲ့ ကျော်ဟိန်းတို့ပါတဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ကားလေးပါ။ ကားနာမည်ကို မမှတ်မိပေမဲ့ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း ပြောသွားတဲ့ အထက်ပါ စကားလေးကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အမြဲအမှတ်ရနေစေလို့ပါ. အဲဒီ ဇာတ်ကား အရင်က ကြည့်ဘူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေလည်း ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်မိတာတော့ အခုကားလေးပါပဲ။
ပထမဆုံး ဖတ်မိတဲ့ ၀တ္ထု - ဆားပုလင်း နှင်းမောင်နှင့် မြိုင်ရာဇာတာတေ။
ပထမဆုံး ကျောင်းစပြေးခဲ့တာ - ၁၀တန်း နှစ် ၊ နေ့ခင်းချိန် မတက်ပဲ ဗွီဒီယိုသွားခိုးကြည့်တယ်။ အဲကားလေးကိုလည်း ကြိုက်လို့ မှတ်မိနေဆဲပါ။ “ကျွန်တော် ချစ်သော မိန်းမများ”
ပထမဆုံး ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သော သီချင်း - ဗဒင်ရဲ့ သိုးမည်းတွေ အကြောင်း၊ ငယ်ငယ်က အဲသီချင်းလေးကို အလွတ်ကျက်ပြီး ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ထိုင်ဖူးသော လ္ဘက်ရည်ဆိုင် - ပွင့်ဦး လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ( ကျားထိုးတယ်၊ကောင်မလေးတွေ ငေးတယ် ):P
ပထမဆုံး ခင်တဲ့ ဘလော့ဂါ - အိမ်လေး
ပထမဆုံး ဂစ်တာတီးတာ - ဒုတိယနှစ်မှ ပါ။
ပထမဆုံး လည်ပတ်ဘူးသော ဘလော့ - ကိုအောင် နဲ့ မနိုင်းနိုင်းစနေ
မကြီးနဲ့ မီးလေးကလည်း အကြွေးတောင်းနေပြီ၊ ရေးပြီးတာက ၂ရက်ရှိပါပြီ။ အင်တာနက် မရလို့ မတင်နိုင်ပဲ ဒီတိုင်းလေးပြစ်ထားတာ ဒီနေ့မှ ရလို့ တင်နိုင်တယ်လေ။ မကြီးနဲ့ မီးလေးရေ.. နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။